PSG မှနေမာသည် ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိဆက်လက်နေထိုင်ရန်တောင်းဆိုသည်
By နေပြည်တော် On နိုဝင်ဘာ 2, 2020
Aဘရာဇီးကြယ်ပွင့်နေမာသည်ရာသီအတွက်အတော်အတန်ရောထွေးစွာကစားခဲ့သော်လည်းသူသည်ကောင်းမွန်သောစံချိန်ရှိခဲ့သည် မှတ်ချက်များစွာနှင့်သူ၏အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရာသီအစတွင် OM ကိုသူထုတ်ပယ်ခြင်းအပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချို့လွဲချော်သောအဓိကဖြစ်ရပ်များ, နေမာရာသီစမှာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီနေထိုင်ခဲ့သည်
PSG အသင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲအားလုံးအတွက်ပွဲ ၆ ပွဲတွင်ဂိုး ၂ ဂိုးနှင့်ကူညီမှု ၄ ချက်ပါ ၀ င်သည် ယခင် FC ဘာစီလိုနာ ယခုရာသီတွင် Auriverde မှလွဲချော်ခဲ့သောပွဲအရေအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်း
အာဂျင်တီးနားဒဏ္legာရီ Maradona အသက် ၆၀ မှာကွယ်လွန်
PSG အသင်း၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှယုံကြည်ရန် ခြေလျင် Mercatoဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးဟောင်းက PSG သို့ပြောင်းရွှေ့လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဟောင်း FC Santos တိုက်စစ်မှူး လြှောကျလှာ PSG ၏အားကစားဒါရိုက်တာလီယိုနာဒိုသည်သူ၏အဓိက ဦး စားပေးမှာ Kylian Mbappé၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
နေမာကသူသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်၌အလွန်သက်သောင့်သက်သာရှိကြောင်းနှင့်သူစာချုပ်သက်တမ်း ၅ နှစ်ထပ်တိုးရန်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်အထိလည်းရှင်းပြခဲ့သည်။ PSG အသင်းနှင့်တိုးချဲ့ရန်ဟူသောအတွေးကသူ့အားမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းသမ္မတနာဆာအယ်လ်ကိုလဖီကိုလည်းစိတ်ချစေခဲ့သည် မကျေနပ်.
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.afrikmag.com/psg-ce-que-reclame-neymar-pour-rester-jusquen-2027/ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Amber Heard ကဂျော်နီ Depp ကိုပြောပြပြီးသူကလူတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်သူမယုံတော့ - Video
Péléသည် Maradona ၏မွေးနေ့အတွက်ရွေ့လျားစာတစ်စောင်ပို့သည် လွန်ခဲ့သော3ပတ်က
[…] မင်းကိုအမြဲတမ်းချီးကျူး အစဉ်မပြတ်ငါမစမည်။ မင်းရဲ့ခရီးရှည်ကရှည်ပါစေ၊ မင်းအမြဲတမ်းပြုံးပြီးငါကိုလည်းပြုံးစေပါစေ။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့! »ဘရာဇီးကြယ်ပွင့်ကိုရေးသားခဲ့သည် […]